Sheekh Shaakir wuxuu qaaday jidkii Xasan Daahir | KEYDMEDIA ONLINE
GURICEEL, Soomaaliya – Maaxamed Shaakir Cali Xasan, oo xilli ahaa sheekh caan ah, aadna looga jecelaa gayiga Soomaalida oo dhan, ayaa ugu danbeyn noqday kutubo xoor aakhiro sheeg ah, kaas ku gambashada dariiqo diimeed ay dad xooggan raacsan yihiin uga faa’iideysanaya daadinta dhiigga, burburnta degaanka, barakicinta danyarta iyo baabi’inta nidaamka dowladnimada ee lagu heshiiyay.
Shaakir oo fulinaya dano kooxo gaar ah oo yoolkoodu yahay in xasilloonudu ka saahirto Galmudug, xasarad iyo xiisad xoogganna Mudug iyo Galgaduud ka aloosnaato, ayaa 1 October 2021, ku duulay degmada Guriceel, taas oo sababtay in maalin ka hor uu ka qarxo dagaal-kii ugu adkaa ee ka dhaca magaaladaas taariikhda.
Duullaankii Shaakir ee Gurecel, wuxuu sababay geerida saraakiishii ugu mihiimsanaa ciidanka ka howlgala degaannada Galmudug, sida Taliyihii Ciidanka Danab ee Galmudug iyo hoggaan kale oo muhiim ah, waxaana si daran u le’day dhallinyaro labada dhinac kala taabacsan oo u badan wiilal degaanka ka soo jeeda.
Duullaankii Shaakir, wuxuu horseeday, burbur magaalo iyo baaba’ hantiyadeed, waxaa dab qabsaday qeyb ka mid ah Isbitaalka ugu weyn gobolka (Istarliin Hospital), kaas oo ay haleeleen madaafiicda la is-weydaarsaday, halka ay inta badan shaqada halkiyeen xarumihii kale ee caafimaadka oo dhankooda ay si daran u saameeyeen madafiicda.
Duullaankii Shaakir, wuxuu dhalay, in ku dhawaad 200,000, oo qof, oo u badan hooyooyin iyo carruur maato ah oo aan heysan meel ay ka galaan dhibicda roobka iyo qorraxda daran ee seymaha roobka ka carareysa ay ka cararaan guryahooda, kuwaas oo si weyn looga soo dayrinayo xaaladdooda nonoleed.
Intaas oo dhibaato ah iyo in ka badan, waxa ay tusaale u yihiin, jidka uu Shaakir u dooray dadka uu doonayo inuu xukumo, waxayna hordhac u yihiin damaca fog ee Kooxda SUFA, ku doonayaan in dalka oo dhan uu qarxo dagaal u dhaxeexa dariiqoonka diinta, sida ka muuqata muuqallada uu duubay 40-kii cisho ee la soo dhaafay.
Kooxda uu hoggaamiyo, waxa ay si aan gambad lahayn, u sheegeen, in qofkii ka hor yimaada damaca wadaadka uu yahay gaal ay haweenku ka furan yihiin, toobad-kenna looga baahan yahay, waana sifo la ceyn ah midda ay ku suntan yihiin Kooxda xiriirka la leh Alqaacida e Al-Shabaab.
Shaakir, sida cad wuxuu meel iska dhigay kitaabadii cilmiga, wuxuu duullaan ku yahay jiritaanka Galmuug, wuxuu la dagaallamayaa Dowladda Soomaaliya, wuxuu noqday wadaad hubeysan oo qori caaraddiis ku doonaya xukunka, wuxuuna dhiigga dugsileyda taabacsan ku dhameynaya gudaha Guriceel.
Wuxuu talo iyo waano ka diiday Uguus-kiisa, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, iyo guud ahaan bulshada ka soo jeedda degaanka, wuxuuna tufta siyaasadda ka qaadanayaa Garowe oo sal-dhig u ah Maxamuud Xasan Faarax, oo qarash lagu siiyo burburinta Galmudug.
Tallaabooyinkaas, oo dhan waxa ay si cad hoosta uga xariiqayaan, in Maxamed Shaakir Cali, uu qaaday jidkii Xasan Daahir Aweys, ee ku saleysnaa, xukun qri ku doonka, daadinta dhiigga iyo gaaleysiinta dadka ka aragtida duwan.
Guuleed Faarax – KEYDMEDEIA ONLINE